पूर्वाधारका ८०% योजना पूरा भइसकेका छन् | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता पूर्वाधारका ८०% योजना पूरा भइसकेका छन्
on: July 12, 2018 अन्तरवार्ता
पूर्वाधारका ८०% योजना पूरा भइसकेका छन्
लोकनाथ भुसाल, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत बेनी नगरपालिका
बेनी नगरपालिकामा सञ्चालित योजना, कार्यप्रगति, आगामी योजनालगायत विषयमा नगरका वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत लोकनाथ भुसालसँग आर्थिक अभियानका म्याग्दी संवाददाता ध्रुवसागर शर्माले गरेको कुराकानी :
तपाईं बेनी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि विकासका काम कसरी अघि बढेका छन् ?
विशेषगरी भौतिक निर्माणतर्फका धेरैजसो काम उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेका छन् । पूर्वाधारका ठूला योजना बोलपत्र आह्वान भएर सञ्चालनमा छन् । अन्य नियमित कामकारबाही पनि जारी छ ।
नगरपालिकाका आगामी योजना के–के छन् ?
नगरपालिकाका आगामी योजना नगरसभाले तय गर्दै छ । सडकलगायत पूर्वाधारका कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ । लक्षित वर्गको सशक्तीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास र संस्थागत सुद्दढीकरणलाई जोड दिएर काम अघि बढाउँछौं ।
नगरपालिकाको बजेटको भौतिक प्रगति कस्तो छ ?
गत नगरसभाबाट स्वीकृत भएका योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । पूर्वाधारका योजना करीब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्य योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । तीमध्ये अधिकांश यसै महीनाको अन्त्यसम्ममा पूरा हुने अपेक्षा छ ।
नगरपालिकाका वडामा योजना सङ्कलनको क्रममा लापरबाही गरिएको गुनासा आएका छन् नि !
योजना सङ्कलन बस्तीस्तरबाट गरी उक्त योजनालाई वडा समितिले प्राथमिकीकरण गरी नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । अहिले बस्तीस्तरमा योजना सङ्कलन भइरहेका छन् । ती योजनालाई वडा समितिले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेपछि नगरपालिकामा पेश हुन्छ । प्रश्नमा भनिएजस्तो यससम्बन्धी गुनासो आएको थाहा छैन ।
कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ?
हामी पूर्वाधारका योजनामा बढी केन्द्रित छौं । कृषि, पशुपालन, सिँचाइ र खानेपानीका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । शिक्षातर्फ पूर्वाधार विकास र शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम अघि सञ्चालन हुनेछ ।
नगरमा कर सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ ?
प्रभावकारी कर प्रणाली स्थापना नभएसम्म नगरको समृद्धि कायम गर्न सकिँदैन । यसलाई दृष्टिगत गर्दै कर सङ्कलनका लागि छुट्टै शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगर क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइनेछ । यसबाट नगरको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । साउनदेखि नगरक्षेत्रका विभिन्न पेशा–व्यवसायी एवम् संस्थालाई दर्ता गरी करदर्ता नम्बर प्रदान गरिनेछ । साथै, नगर क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गरी त्यसको उपयोगमा सेवाशुल्क लिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
नगरपालिकाका मापडण्डविपरीत घरटहरा कसरी व्यवस्थित गरिँदै छ ?
नगर क्षेत्रमा रहेका घरटहराको साउनदेखि लगत सङ्कलन गरिनेछ । अवैध घरटहरा भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई समयसीमा तोक्छौं । भत्काउन सम्भव नभए त्यस्ता घरटहरा नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइनेछ । सार्वजनिक स्थानमा भएका टहरालाई नगरको आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिई व्यावसायिक प्रयोग गरिनेछ ।
पानी पर्नेबित्तिकै बाढी आएर ढल भरिएर बजार डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि कस्तो योजना छ ?
ढल पुरानो भएकाले क्षमता बढाउनुपर्ने भएको छ । अब नगरको ढलसम्बन्धी डीपीआर तयार पारी सोअनुसार दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ । यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजन कार्यालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।
नगरपालिकाको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् नि !
नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवामा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो यदाकदा आए तापनि पहिलेभन्दा चुस्त भएको छ । अधिकांश काम वडा कार्यालयबाटै सम्पादन भइरहेका छन् । सेवा लिन नगरमा आउनुपर्ने अवस्था न्यून छ ।